Raw Fulolvrantrant (129453-61-8) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Fulvestrant (129453-61-8)
Rating: SKU: 129453-61-8. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee Fulvestrant (CAS 129453-61-8), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Fulvestrant waa antagonist xasaasiyadeed oo loo yaqaan 'estrogen'. Hoos udhaca tamoxifen (oo leh saameyn khatar ah) iyo kororiyeyaasha aromatase (taas oo hoos u dhigta estrogen ee loo heli karo unugyada burooyinka), fulvestrant ayaa si tartiib ah ugu xiran xayawaanka estrogen ee unugyada kansarka naasaha, taasoo keentay in la gooyo estrogen deformation oo hoos u dhigta estrogen.
Astaamaha aasaasiga ee Fulvestrant
Formula kelli: C10H14N6O5
Miisaankani waa: 298.25536
Dhibcaha Biyaha: 61-71 ° C
Fulvestrant (129453-61-8) isticmaalka wareegga steroid
Fulvestrant (CAS 129453-61-8), Magaca Brando waa Faslodex.
Fulvestrant wuxuu yimaadaa xalka (dareeraha) si tartiib ah loogu duro 1 illaa 2 daqiiqado murqaha bararka. Fulvestrant (129453-61-8) waxaa maamula dhakhtarka ama kalkaaliyaha xafiiska xafiiska. Waxaa badanaa la bixiyaa marxalad kasta oo 2 ah ee qiyaasta ugu horeysa ee 3 (maalmo 1, 15, iyo 29) ka dibna hal mar bil ka dib. Waxaad helaysaa qiyaasta daawadaada laba nooc oo kala duwan oo mid ah (midkiiba midkiiba).
Digniin ku saabsan Fulvestrant
Dareen-celinta soo socda ayaa si faahfaahsan looga hadli doonaa qaybaha kale ee calaamadaynta: Khatarta Dhiig-baxa, Kacaawinta sii kordhaysa ee Bukaan-jiifka leh Dhibaato Ba'an, Cirridka Sii-dooynta, Cudurka Embryo-Fetal.
Hormoonada waa kiimikooyin kiimiko ah oo ay soo saaraan qanjidhada jidhka, taas oo ka dhigaysa dhiigga socodka waxayna saameyn ku yeelataa unugyada kale. Tusaale ahaan, testosterone hormoon oo lagu sameeyay xiniinyaha oo masuul ka ah sifooyinka labka ah sida codka oo sii kordhaya iyo timaha jidhka oo kordhay. Isticmaalka daaweynta hoormoonka ee lagu daaweeyo kansarka waxay ku saleysan tahay fiirinta xayiraadaha hormoono gaar ah oo loogu baahan yahay kobaca unugyada waxay ku yaalaan dusha sare ee unugyada kansarka qaarkood. Daaweynta hormoonka waxay ku shaqeyneysaa joojinta wax soo saarka hormoon gaar ah, xannibaya hormoonnada hormoonka hormoonka, ama bedelida walxo isku mid ah oo loogu talagalay hormoonka firfircoon, oo aan loo isticmaali karin unugyada tumo. Noocyada kala duwan ee daaweynta hoormoonka waxaa lagu sifeeyey shaqadooda iyo / ama nooca hoormoonka ee saameeya.
Kansarrada naasaha badankood waxay leeyihiin qabtayaasha estrogen, koritaanka burooyinkani waxay kicin karaan estrogen. Fulvestrant (129453-61-8) waa daaweyn hoos udhaca daawada estrogen, tani macnaheedu waa waxay ku xidhan tahay goobta daaweynta estrogen ee tartanka leh estrogen ee jirka. Marka ay ku xirto goobta waxay u keentaa dadka soo dhaweeyaa inay jabaan, taas oo ka hortagaysa jawaab celinta caadiga ah ee loo yaqaan estrogen.
Sida loo iibsado Fulvestrant AASraw
Budada Gestonorone acetate (31981-44-9)